Xog: Shariif Xasan oo isku shaandhayn ku samaynaya Golahiisa Wasiiradda. – Hornafrik Media Network
Madaxwaynaha Dawlad Goboleedka Koonfur Galbeed Somalia, Shariif Xasan Sh Aadan ayaa la filayaa inuu isku shaandhayn ku sameeyo Golaha Wasiiradda ee Maamulkaasi, isagoo meesha ka saaraya qaar ka mida Wasiiradda Maamulkaasi, halka Wasiiro kalana uu u kala badali doono Wasaaradaha.
Liiska Wasiiradda Cusub ayaa loo xaqiijiyay Hornafrik inay diyaarsan yihiin oo kaliya la filayo in lagu dhawaaqo. Waxaana Wasiiradda la magacaabayo ka mida Madoobe Nuunoow oo xilal kala duwan ka soo qabtay Dawladda Somalia oo ku qoran Wasiirka Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed, sidoo kale Wasiirka Hubka dhigista, Xasan Xuseen ayaa isna ku qoran Wasiirka Amniga, sida ay xogta ku heshay Hornafrik.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa tan iyo mudadii la dhisay waxa uu ku shaqaynayay Baydhabo oo ah Xarun KMG ah, mana aysan u guurin Xarunta Rasmiga ah ee Maamulkaasi oo ah Degmadda Baraawe, iyadoona Shariif Xasan lagu dhaliilo waqtigiisa inta badan inuu galiyo Siyaasadda Federaalka oo uusan hoos u eegin Maamulka uu Madaxwayne Goboleedka ka yahay.